နောက်ခံ Background ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း Photoshop မလိုဘဲ A.I နည်းပညာနဲ့ ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် Free Online Tool | MyTech Myanmar
နောက်ခံ Background ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း Photoshop မလိုဘဲ A.I နည်းပညာနဲ့ ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် Free Online Tool
ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံရဲ့ နောက်ခံ Background တွေကို မကြိုက်လို့ ဖြစ်စေ၊ မလှလို့ ဖြစ်စေ ဖယ်ရှားချင်ရင် တော်တော်လေးကို အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း Photo Editing Application တွေက အဆင်မြင့်လာပြီဆိုပေမယ့် Background ဖယ်ရှားချင်ရင် Manual လုပ်ရတာမျိူးတွေက အလုပ်ရှုပ်သလို အချိန်လည်း ကုန်စေပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ App Download လုပ်စရာမလို၊ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းခံပြီး Manual Edit လုပ်စရာမလိုတဲ့ Background Removal Free Online Tool လေး တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ အဆိုပါ Tool လေးရဲ့ နာမည်က Remove.bg ဖြစ်ပြီး ထူးခြားချက်ကတော့ Background တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက် Artificial Intelligence လို့ခေါ်တဲ့ A.I. နည်းပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဓာတ်ပုံထဲက Background ကို ကိုယ်က သီးသန့်ပြုပြင် ဖယ်ရှားစရာမလိုဘဲ A.I. က အလိုအလျောက် ဖယ်ရှားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ Background ကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် အချိန် ၅စက္ကန့်လောက်သာ လိုအပ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ Image Result တွေကလည်း ကျွန်တော် စမ်းသုံးကြည့်ရသလောက်ဆိုရင် တော်တော်လေးကို ကျေနပ်အားရစရာကောင်းပါတယ်။
အဆိုပါ Tool လေးကို Remove.bg ဝက်ဆိုက်မှာ သွားရောက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အသုံးပြုဖို့အတွက် အခကြေးငွေ ပေးစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ လောလောဆယ် ပြောတာပါ။ အသုံးပြုသူ အရေအတွက် များလာတယ်ဆိုရင် အခကြေးငွေ ပေးမှ သုံးလို့ရမယ့် အနေအထားကို ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
Remove.bg နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သတိချပ်စရာ ရှိတာက အဆိုပါ Tool ဟာ Portrait ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ Background တွေကိုသာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာပါ။ ဒါ့အပြင် A.I ကလည်း လူတွေရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုသာ အဓိကထားပြီး ရှာဖွေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တိရိစ္ဆာန်ပုံတွေ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အကျိူးရောက်သက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ လောလောဆယ်မှာ အမြင့်ဆုံး Pixels Size 500 x 500 ဓာတ်ပုံတွေကိုသာ Download ရယူနိုင်တာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီထက် ပိုမြင့်တဲ့ Resolution နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Download ပြုလုပ်နိုင်မယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ Developer တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Website ဒါမှမဟုတ် App တွေမှာ အလွယ်တကူ ထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့အတွက် API ကိုလည်း မကြာခင်မှာ ဖြန့်ချီပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Remove.bg Official Website
နောကျခံ Background ကို စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျး Photoshop မလိုဘဲ A.I နညျးပညာနဲ့ ဖယျရှားပေးနိုငျမယျ့ Free Online Tool
ဓာတျပုံ တဈပုံရဲ့ နောကျခံ Background တှကေို မကွိုကျလို့ ဖွဈစေ၊ မလှလို့ ဖွဈစေ ဖယျရှားခငျြရငျ တျောတျောလေးကို အလုပျရှုပျပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျး Photo Editing Application တှကေ အဆငျမွငျ့လာပွီဆိုပမေယျ့ Background ဖယျရှားခငျြရငျ Manual လုပျရတာမြိူးတှကေ အလုပျရှုပျသလို အခြိနျလညျး ကုနျစပေါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ App Download လုပျစရာမလို၊ အခြိနျကုနျ လူပငျပနျးခံပွီး Manual Edit လုပျစရာမလိုတဲ့ Background Removal Free Online Tool လေး တဈခု ထှကျပျေါလာပါပွီ။ အဆိုပါ Tool လေးရဲ့ နာမညျက Remove.bg ဖွဈပွီး ထူးခွားခကျြကတော့ Background တှကေို ဖယျရှားပဈဖို့အတှကျ Artificial Intelligence လို့ချေါတဲ့ A.I. နညျးပညာနဲ့ ပေါငျးစပျပွုလုပျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဓာတျပုံထဲက Background ကို ကိုယျက သီးသနျ့ပွုပွငျ ဖယျရှားစရာမလိုဘဲ A.I. က အလိုအလြောကျ ဖယျရှားပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျမကွိုကျတဲ့ Background ကို ဖယျရှားဖို့အတှကျ အခြိနျ ၅စက်ကနျ့လောကျသာ လိုအပျပွီး ထှကျလာတဲ့ Image Result တှကေလညျး ကြှနျတျော စမျးသုံးကွညျ့ရသလောကျဆိုရငျ တျောတျောလေးကို ကနြေပျအားရစရာကောငျးပါတယျ။
အဆိုပါ Tool လေးကို Remove.bg ဝကျဆိုကျမှာ သှားရောကျ အသုံးပွုနိုငျပွီး၊ အသုံးပွုဖို့အတှကျ အခကွေးငှေး ပေးစရာ မလိုအပျပါဘူး။ လောလောဆယျ ပွောတာပါ။ အသုံးပွုသူ အရအေတှကျ မြားလာတယျဆိုရငျ အခကွေးငှေ ပေးမှ သုံးလို့ရမယျ့ အနအေထားကို ရောကျရှိလာနိုငျပါတယျ။
Remove.bg နဲ့ပတျသတျပွီး သတိခပျြစရာ ရှိတာက အဆိုပါ Tool ဟာ Portrait ဓာတျပုံတှရေဲ့ Background တှကေိုသာ ဖယျရှားပေးနိုငျတာပါ။ ဒါ့အပွငျ A.I ကလညျး လူတှရေဲ့ ပုံပနျးသဏ်ဍာနျကိုသာ အဓိကထားပွီး ရှာဖှတောဖွဈတဲ့အတှကျ တိရိစ်ဆာနျပုံတှေ အသုံးပွုမယျဆိုရငျ အကြိူးရောကျသကျရောကျမှု မရှိပါဘူး။ လောလောဆယျမှာ အမွငျ့ဆုံး Pixels Size 500 x 500 ဓာတျပုံတှကေိုသာ Download ရယူနိုငျတာဖွဈပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ ဒီထကျ ပိုမွငျ့တဲ့ Resolution နဲ့ ဓာတျပုံတှကေို Download ပွုလုပျနိုငျမယျလို့ ပွောကွားထားပါတယျ။ Developer တှအေနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ Website ဒါမှမဟုတျ App တှမှော အလှယျတကူ ထညျ့သှငျးအသုံးပွုဖို့အတှကျ API ကိုလညျး မကွာခငျမှာ ဖွနျ့ခြီပေးသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
MyTech Myanmar2018-12-21T12:26:58+06:30December 21st, 2018|HowTo, News, Technology, Tips & Stories|